Radio Budhinanda FM - BFM || २०७७ माघ ४ आइतबार
'पहिलाको संविधानको धारा ५३ को (४) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर अहिले संविधान निर्माणमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ अनुसार अन्य व्यक्तिले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा संसदलाई अगाडि बढ्न नदिएको बताए। संविधानमा यति लेखेपछि के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् लेख्नुपर्ने हो र श्रीमान्?'
'प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा दिएको जवाफमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 'अगावै विघटन भए बाहेक ५ वर्षको हुनेछ' भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरेका छन्। संसद विघटन अगावै हुन सक्ने तर्क गरेका छन्। धारा ८५ मा 'संविधान बमोजिम विघटन भएबाहेक संसदको अवधि पाँच वर्ष हुनेछ' भनेर लेखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भने 'संविधान बमोजिम' भन्ने शर्त जानाजानी उल्लेख गरेनन्।'
त्यसपछि इजलास समक्ष आचार्यले प्रश्न गरे, 'सनकमा विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छ? संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा, षडयन्त्रपूर्वक हटाउन खोजेमा संसद विघटन गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ श्रीमान्?'